Ihe ịrịba ama 8 nke mbufụt na urethra. – Noor Health Life
Ihe ịrịba ama 8 nke mbufụt na urethra.
Mbufụt nke urethra bụ ọrịa na-egbu mgbu nke ọtụtụ ndị mmadụ na-ala azụ ikwu maka ya.
Ma ị maara na mgbaàmà nke mbufụt ma ọ bụ UTI a doro anya nke ọma na mgbe mgbe enwere ike ịmata ha ọbụna tupu mmalite nke ọrịa ahụ?
Noor Health Life na-ekwu na mgbaàmà nke mbufụt a pụtara ìhè mana ọtụtụ ndị na-eleghara ha anya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ọrịa urinary tract, ị ga-echetarịrị akara ngosi ndị a.
Mbufụt nke urethra dị mfe iji zere
Na-agba ume ka ị na-agba mmiri mgbe niile
Nke a bụ ihe mgbaàmà na-emekarị nke UTI nke ọ na-adị gị ka ị na-agbapụta mmamịrị oge niile, ọ bụrụgodị na ị bịarutere n’ebe a na-asa ákwà, ị nwere ike ịnwe ihe mberede na nke a ya bụ gaa ozugbo.
Mmamiri dị ntakịrị
Mgbe ị na-aga n’ime ụlọ ịsa ahụ, ọ naghị esiri gị ike ịmịpụta, ọ dị gị ka ị ga-emekwu ihe mana ị nweghị ike ime ya n’agbanyeghị mbọ gị ma ọ bụ afọ ojuju gị.
Ịga n’ime ụlọ ịsa ahụ n’oge ọrịa a nwere ike ime ka ị na-agbakasị ahụ, ị ​​nwere ike iche na ọrụ a na-egbu mgbu, na mgbakwunye na ọ nwere ike ịnwe mgbu, n’ọnọdụ abụọ ahụ ọ bụ ihe ịrịba ama nke nsogbu ahụ.
UTI na-ebutekarị ọbara na mmamịrị, mana ọ bụchaghị na onye ọ bụla, n’ihi na ọ nwere ike ime ka ọhụhụ ụzọ.
Isi mmamịrị dị njọ nke ukwuu n’ihi ụdị ọrịa ọ bụla nke eriri afo ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-enwetakwa ihe mgbaàmà ndị a dị n’elu na ume adịghị mma, ọ nwere ike ịbụ UTI. Rụtụ aka wee nwalee dịka ntuziaka ya si dị.
Ihe na-ebutekarị ọzịza nke eriri afọ
Agba nke mmamịrị nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe, gụnyere ọrịa urinary tract. Ọ bụrụ na agba a bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa edo edo ma ọ bụ transperent, ọ bụ ihe ịrịba ama nke nchegbu. Uhie ma ọ bụ aja aja bụ ihe ịrịba ama nke ọrịa, mana buru ụzọ chọpụta na i ribeghị nri ọ bụla nwere agba pink, oroma ma ọ bụ ọbara ọbara.
Oke ike ọgwụgwụ
N’ezie, ọnya nke eriri afọ urinary na-ebute ọrịa nke eriri afọ, n’ọnọdụ ọ bụla, n’ihi ọrịa ahụ, mgbe ahụ matara na ihe adịghị mma, ọ na-amalite ịza. na-akpata mmetụta nke ike ọgwụgwụ.
Ahụ ọkụ, n’etiti mgbaàmà ndị ọzọ, na-egosikarị mmụba nke oke mbufụt na tract urinary na mgbasa nke ọrịa na akụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ karịa 101 Fahrenheit ma ọ bụ oyi na-atụ gị ma ọ bụ ahụ gị na-ejupụta na ọsụsọ mgbe ị na-ehi ụra n’abalị, ị ga-achọ enyemaka ahụike ozugbo.
Mbufụt nke urethra bụ ọrịa na-egbu mgbu ma ọtụtụ ndị na-ala azụ ikwu maka ya.
E nwekwara ihe ize ndụ nke ọrịa akụrụ n’ihi ọrịa a ma ọ bụ mbufụt na mgbaàmà ya na-apụtakarị n’ụdị ọkụ na-egbu mgbu na mmamịrị, ebe ọ na-agụkarị mmamịrị, na-agbanwe agba. n’ọnọdụ ndị siri ike.
Ọbara na mmamịrị na-esi ísì ụtọ bụkwa ihe mgbaàmà.
Ọ bụrụ na a gwọọghị ya ma ọ bụ na-achọpụtaghị ya, ọrịa ahụ nwere ike isi na eriri afọ banye akụrụ wee bute mbufụt nke akụrụ, nke nwere ike igbu mmadụ.
Site n’ụzọ, enwere ụfọdụ ihe kpatara nke a nke siri ike ịchịkwa dị ka ịka nká, ụmụ nwanyị nọ n’ihe ize ndụ karịa ụmụ nwoke, afọ ime, akụrụ akụrụ, ọrịa shuga na ọrịa Alzheimer wdg.
Mana enwerekwa ụfọdụ omume ndụ nke na-abawanye ohere nke ọrịa ahụ.
Elegharala ịdị ọcha anya
N’ezie, ịdị ọcha na-adịghị ọcha nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ nke nje bacteria ndị a na-abawanye, nke na-eme ka ohere nke mbufụt nke eriri afọ.
Na-aṅụ obere mmiri
Nnyocha nke Noor Health Life chọpụtara na àgwà nke ịṅụkwu mmiri na-ebelata ohere nke mbufụt nke eriri afọ urinary, karịsịa maka ụmụ nwanyị. Dị ka nyocha, ụzọ kachasị mfe na nke dị nchebe iji zere ọrịa a na-egbu mgbu bụ igbochi ọrịa na ịṅụ otu lita mmiri karịa ka ọ dị na mbụ na-enyere aka igbochi ọrịa a. Dị ka nyocha, ụmụ nwanyị nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa a karịa ụmụ nwoke, mana ndị nwoke kwesịkwara ịkpachapụ anya a. O kwuru na ịṅụkwu mmiri na-eme ka ọ dịrị mfe ikpochapụ nje bacteria na-agbakọba na eriri afọ nakwa na ha anaghị agbakọba nke na-ebute ọrịa ahụ.
Jiri akwa siri ike mee ihe
Iji uwe siri ike eme ihe ugboro ugboro nwere ike ibute ọrịa na-egbu mgbu dị ka mbufụt ma ọ bụ ọrịa nke eriri afọ, iji uwe na-abawanye ohere nke mbufụt nke urethra.
N’ihi ọrụ ụfọdụ, ma ọ dị ọnụ ala ma ọ bụ ihe ọ bụla kpatara ya, onye ọ bụla n’ime anyị bụ onye na-akwụsị mmamịrị na ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ gwụla ma anyị malite ime ya nke ukwuu ma ọ bụ banye n’omume. Ọ bụrụ na a zụlite àgwà dị otú ahụ, ọ pụrụ ịkpata ezigbo nsogbu. Ime nke a na-abawanye uto nke nje bacteria na-emerụ ahụ, nke na-eme ka ohere nke mbufụt nke eriri afọ.
Enwere usoro yist pụrụ iche (VCUG) iji tụọ nrụgide dị n’ime eriri afo na urethra n’oge mmamịrị nke ga-egosi iji x-ray ihe na-eme mgbe nwa gị na-amịpụta.
Sistemụ mmamịrị (nwanyị)
VCUG na-anọchi anya “ịgbasawanye cysto-retrogram”) nke pụtara mmamịrị. “Cysto” bụ maka eriri afo. “Urethro” bụ maka urethra, tube nke na-ewepu mmamịrị site na eriri afo. “gram” pụtara foto. Ya mere, VCUG bụ foto nke mpụta mmamịrị si na eriri afo site na urethra.
Nnwale ahụ na-eji ụdị mmiri pụrụ iche a na-akpọ variant medium iji gosipụta mmamịrị dị na X-ray nke ọma.
Jikere nwa gị maka ule a
Wepụta oge gụọ ozi a nke ọma ma kọwaara nwa gị ya. Ụmụaka maara ihe ha ga-atụ anya ya adịchaghị enwe nchekasị. Gwa nwa gị gbasara ule ahụ n’okwu ọ na-aghọta, yana okwu ndị ezinụlọ gị na-eji aghọta ka ahụ ahụ si arụ ọrụ.
Dịka akụkụ nke ule ahụ, a ga-etinye obere tube a na-akpọ catheter n’ime urethra nwa gị. Ọ ga-abụ ihe na-egbu mgbu itinye catheter. Ma ọ bụrụ na nwa gị eguzoro jụụ, ọ ga-aka mma iyi uwe. Ị nwere ike ịkụziri nwa gị ka ọ daa jụụ site n’iku ume. Gwa nwa gị ka o detuo kandụl ụbọchị ọmụmụ, fesa balloons ma ọ bụ hapụ afụ. Mee mgbatị ahụ iku ume n’ụlọ tupu ị bịa n’ụlọ ọgwụ.
Ndị na-eto eto na-eweta ihe dị mma mgbe ụfọdụ n’oge ule. Nwa gị nwere ike isi n’ụlọ bute ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ akwa akwa.
Otu n’ime nne na nna nwere ike ịnọnyere nwa ahụ n’oge ọ bụla n’oge ule. Ọ bụrụ na ị dị ime, ị nwere ike ịnọ n’ime ụlọ ruo mgbe etinyere catheter. Mana ị ga-ahapụrịrị ụlọ ahụ n’oge a na-ahụ X-ray nwa.
Ịkwesịrị ịgwa nwa gị na dọkịta ma ọ bụ ọkà mmụta nkà na ụzụ nwere ike imetụ akụkụ ahụ ya aka ka ọ dị ọcha ma tinye tubes n’ime ha. Gwa nwa gị na ị hapụla ya ka o metụ ya aka n’ihi na ule ahụ ga-enyere aka.
Ndị ọkà mmụta teknụzụ abụọ ga-eme ule a
Ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ bụ ọkachamara na ntinye catheter na nyocha X-ray. Mgbe ụfọdụ, onye na-ahụ maka redio ga-anọrịrị n’ime ụlọ n’oge ule. Onye na-ahụ maka redio na-agụ X-ray.
Sistemụ mmamịrị (nwoke)
Onye na-ahụ maka teknụzụ X-ray ga-akwadebe nwa gị maka ule ahụ site n’ịgwa ya ihe ga-eme n’oge ahụ. Dọkịta na-ahụ maka redio ga-ehichapụ ebe amụ ma ọ bụ urethra nwa gị na-aga. Onye na-ahụ maka teknụzụ ga-etinyezi tube na-agbanwe agbanwe n’ime oghere oghere. Otu catheter bụ tube dị ogologo, dị gịrịgịrị, dị nro, dịkwa larịị nke na-esi na urethra banye n’ime eriri afo. Ndị na-ahụ maka teknụzụ ga-akọwa nke a n’oge ọ bụla, dịka ha na-eme.
Ọ bụrụ na nwa gị nwere ọnọdụ obi
Nwa gị nwere ike ịchọ ịṅụ ọgwụ nje tupu ya emee ule ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ụmụaka nwere ọnọdụ obi kwesịrị ịṅụ ọgwụ nje tupu ha agakwuru dọkịta ezé. Ọgwụ nje bụ ọgwụ na-egbu ọrịa. Ọ bụrụ na nwa gị chọrọ ọgwụ a, biko gwa dọkịta na-enye nwa gị VCUG. Dọkịta ga-enweta ọgwụ a tupu enye nwa gị VCUG.
A na-arụkarị VCUG n’ụlọọgwụ
Ngalaba na-ahụ maka nchọpụta nchọpụta na-achọpụta nrụgide dị n’ime eriri afo na urethra n’oge mmamịrị. A na-akpọkarị ya ngalaba X-ray. Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ngalaba a dị, chọpụta site na nnabata ndị isi.
Nlele a na-ewe nkeji 20 ruo 30. Mgbe ule ahụ gasịrị, ị ga-anọrịrị na mpaghara a ihe dịka nkeji iri na ise ruo mgbe sket ahụ dị njikere.
Mgbe ịbanye na ngalaba nyocha nchọpụta, a ga-edobe nwa gị n’otu ọnụ ụlọ na-agbanwe agbanwe, yi uwe ụlọ ọgwụ. A ga-akpọrọ nwa gị gaa n’ime ụlọ X-ray. Naanị otu nne ma ọ bụ nna ga-enwe ike iso nwa ahụ gaa.
N’ime ụlọ X-ray
Ozugbo gị na nwa gị nọ n’ime ụlọ X-ray, ọkà mmụta teknụzụ ga-agwa gị ka ị yipụ akwa akwa nwa gị. Mgbe ahụ nwa gị ga-edina ala na tebụl X-ray. Enwere ike itinye bandeeji nchebe n’afọ ma ọ bụ ụkwụ nwa gị iji jide n’aka na ọ dị nwa gị mma.
Igwefoto dị na tebụl ga-ese foto. Ọkachamara teknụzụ ga-eji ihuenyo telivishọn hụ ihe na-eme n’oge ule.
Mgbe onye na-ahụ maka nkà na ụzụ na-eme X-ray, nwa gị kwesịrị ịnọ na-adị ka o kwere mee iji nweta nsonaazụ kacha mma. Ị nwere ike ijide aka nwa gị ntakịrị ruo n’obi gị ka ị nwee ike ịdọpụ nwa ahụ n’akụkụ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịbụ abụ ma ọ bụ abụ.
Kateta dabara adaba
Onye na-ahụ maka teknụzụ X-ray ga-amalite ule ahụ site na ikpochapụ ebe nwa gị zoro ezo na itinye tube. Igwe catheter ga-ekpochapụ eriri afo ahụ n’onwe ya.
A ga-ejikọta catheter na karama nwere ihe dị iche. Ọdịiche a ga-esi na tube ọkara banye n’ime eriri afo. Nke a ga-eme ka onye na-ahụ maka teknụzụ nwee ike ịhụ nke ọma n’ime eriri afo na urethra. Nwa gị ga-enwe ike ịhụ ọdịiche ahụ ka ọ na-agafe eriri afọ. O nwere ike ịdị ya mana ọ gaghị afụ ụfụ.
Onye na-ahụ maka teknụzụ X-ray ga-ewere ụfọdụ ụzarị X-ray mgbe ihe dị iche na-eru n’ime eriri afo. Mgbe eriri afọ nwa gị jupụtara, a ga-agwa nwa gị ka ọ rịa mmamịrị n’ihe ndina ma ọ bụ diaper. Igwe catheter ga-apụta ngwa ngwa ngwa ngwa nwa gị na-amịpụta. Ọkachamara teknụzụ ga-ewere ụfọdụ X-ray mgbe nwa gị nọ na-amịpụta. Ndị a bụ foto kacha mkpa nke ule ahụ.
Mgbe ule ahụ gasịrị
Ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ X-ray ga-agwa gị ka ị ga-esi banye n’ime ụlọ na-agbanwe ka nwa ọhụrụ nwee ike yikwasị uwe ya. Mgbe ahụ ị na-anọdụ ala n’ọnụ ụlọ nchere. Mgbe ịlele ihe osise X-ray, onye na-ahụ maka nkà na ụzụ ga-agwa gị mgbe ị nwere ike ịga.
Ọ bụrụ na ị nwere oge oge na ụlọ ọgwụ ịhụ dọkịta mgbe ule ahụ gasịrị, gwa onye na-ahụ maka nkà na ụzụ. Ha ga-ahụ na ezigara nsonaazụ gị n’ụlọọgwụ. Ọ bụrụ na ịhụghị dọkịta mgbe ule ahụ gasịrị, a ga-ezigara dọkịta nwa gị nsonaazụ ya n’ime otu izu.
Nye nwa gị ọtụtụ mmiri mmiri n’ụlọ
Oge ụfọdụ mgbe ule ahụ gasịrị, nwa gị nwere ike ịnwe ahụ erughị ala, dị ka ahụ ọkụ mgbe ọ na-amịpụta. Nye nwa gị ọtụtụ mmiri ka ọ ṅụọ n’echi ya ma ọ bụ abụọ, dị ka mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ apụl. Ịṅụ mmanya na-aba n’anya ga-enyere nwa gị aka ma ọ bụrụ na ọ nwere nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nsonaazụ QuoteTest, biko lelee Technologist. Ọ bụrụ na nwa gị anaghị ezu ike ihe karịrị awa iri abụọ na anọ, kpọọ dọkịta ezinụlọ gị.
(VCUG) bụ ule a na-eji x-ray chọpụta ihe na-eme mgbe nwa gị na-agba mamiri.
N’oge ule, nwa ọhụrụ ga-etinye urethra n’ime urethra ya.
Nnwale ahụ nwere ike ịfụ ụfụ. Ị nwere ike ime ka nwa gị zuru ike dịka o kwere mee n’ụlọ tupu ule ahụ, dị ka mgbatị ahụ. Ị nwere ike ịkpọtụrụ Noor Health Life site na email na WhatsApp maka ajụjụ na azịza ndị ọzọ. noormedlife@gmail.com